( 37) Steel Wool Photography ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စု (၃ရ)
ယခင် ရေးခဲ့သည့် Light Painting Photography ဓါတ်ပုံ ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စုတွင် ပန်းချီရေး သကဲ့သို့ လက်ဖြင့် ရေးဆွဲသည့် Light Painting ၏ မူကွဲတစ်မျိုး ဖြစ်သည့် Steel Wool အကြောင်း ရေး ရန် ကျန်နေခဲ့ပါသည်။ Steel Wool Photography မှာ မီးဖိုချောင်များတွင် အိုးမဲ များကို တိုက်ချွတ်သည့် အခါ သုံးသည့် Steel Wool Sponge ဟုခေါ်သော သတ္တု အမျှင် များကဲ့ သို့ သော သတ္တု အမျှင်များကို မီး ရှို့ ကာ ဝှေ့ ရမ်း ခြင်း ဖြင့် ဆန်းပြား သည့် ပုံ အမျိုးမျိုး ဖန် တည်း သည့် နည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် မီးဖို ချောင်သုံး Steel Sponge ကိုမူ သုံး ၍ မရပါ။
ယခု ရေးသားမည့် Steel Wool မှာမူ မီး ဖို ချောင်သုံး Steel Wool ကဲ့သို့ မကြမ်း လှပါ။ အနုစား ဖြစ်ပါသည် အတန်းစား အဆင့်ဆင့် ရှိပါသည်။ စင်စစ် အားဖြင့် အဆိုပါ Steel Wool သည်လည်း ဆေး များ ချေး များ တိုက် ချွတ်သည့် နေရာ အမျိုးမျိုး တွင် သုံးသည့် အရာ သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းကို မီး ရှို့ လျှင် မီး လောင်ပါ သည်။ မီးလောင်သည် ဆိုရာတွင် သတ္တု အမျှင်များ မီး ရဲ လာခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် မီးတောက် ( Falme ) မဟုတ်ပါ။ ၄င်းကို မီး ရှို့ ကာ အဆိုပါ Light Source ကို ပုံ အမျိုးမျိုး ဝှေ့ ရမ်း လှုပ် ရှား ခြင်း ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခြင်း ဖြင့် ဆန်း ကျယ်သည့် ပုံ များ ရ ရှိလာ သဖြင့် Steel Wool Phptography ဟု သီးးခြား ခေါ် လာ ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Light Painting မှာ Light Soure အမျိုးမျိုး ဖြင့် ပန်းချီးရေးသကဲ့ သို့ လိုရာ ပုံ ကိုရေး ဆွဲခြင်း ၊ ပုံ သဏ္ဍာန် များဖေါ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး Steel Wool Painting မှာ မူ ရုပ် ပုံ အတိအကျ ရေးဆွဲ ခြင်းမဟုတ်ဘဲ Pattern များကို ဖန်တည်း ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Steel Wool အတန်း အစား အမျိုးမျိူး နှင့် အသုံး ပြု မှု။
Steel Wool အလိပ် တစ်လိပ်၏ ပုံ။
Steel Wool သည် သေးငယ် လှသည့် Steel သတ္တု အမျှင်ကလေးများသာ ဖြစ်ပါ သည်။ အဓိက အသုံးပြု သည်မှာ ချေး ချွတ် သည့် နေရာတွင် သုံး ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
Paint and varnish removal; removing paint spots from resilient floors.
Removing scratches from brass; removing paint spots from ceramic tile; rubbing floors between finish coats.
Rust removal; cleaning glazed tiles; removing marks from wood
Brass finishing; cleaning tile; with paint and varnish remover, removing stubborn finishes.
With linseed oil, satinizing high-gloss finishes.
Removing paint spots or stains from wood; cleaning polished metals; rubbing between finish coats.
Final rubbing of finish; stain removal. Clean window and Glass without liquid.
Steel Wool fibre width, mm
အထက်ပါ Steel Wool အမျိုး အစား များ အနက် ယေဘူ ယျ အားဖြင့် နူးညံ့ သည့် အဆင့် များဖြစ်သော Medium Fine -00 မှ Super Fine – 0000 အဆင့် များကို Steel Wool Photography အတွက် သုံး လေ့ ရှိကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ Medium Fine -00 အဆင့်သည် Super Fine – 0000 နှင့် နှိုင်းယျဉ် လျှင် အတန် အသငိ့ အမျှင် ပိုထူ ကာ မီးလောင်နှုန်း နှေး ပါသည်။ Super Fine – 0000 မှာ မူ မီးလောင်နှုန်း ပို၍ မြန်ပါသည်။
Steel Wool Photography အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း များ။
အထက်ပါ ပုံတွင် Steel Wool အလိပ်၊ Steel Wool ထည့် ကာ မီးရှို့ ရန် မွှေတန် ( Whisk) ၊ Steel Wool ကို ဖြတ်ရန် Cutter ၊ မီးရှို့ ထားသည့် Steel Wool ထည့် ထားသော မွှေတန် ( Whisk ) ကို ချည် ကာ ဝှေ့ ရမ်းရန် သံ ကြိုး ၊ Steel Wool ကို မီးရှို့ ရန် မီးချစ် ၊ မီးလောင်နေသည့် Steel Wool ကို ဝှေ့ ရမ်း ရာတွင် မီးဖွားများ ကို ကာကွယ်ရန် ထီး စသည် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ Steel Wool ကို မီးရှို့ ရာတွင် 9V ဘက်ထရီ နှင့် လည်း ရှို့ ၍ ရပါသည်။ 9V ဘက်ထရီ ၏ Positive- Negative ငုတ် နှစ်ခု မှာ တစ်ဘက်ထည်း တွင် ဖြစ် သောကြောင့် ဘက်ထရီ နှင့် Steel Wool ကို တို့ လိုက်လျှင် Electric Short Circuit ဖြစ်ကာ Steel Wool ကိုမီးလောင် စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Steel Wool ထည့်ရန် အိမ် (Housing) ပြု လုပ်နည်း။
Stell Wool ထည့်ရန် မွှေတန် ( Whisk ) မရှိပါက Stell Wool ထည့် သည့် Housing ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြု လုပ် နိုင်ပါသည်။
၁။ Stell Wool အပူ ရှိန် ကိုခံ နိုင်သည့် သံဇကာ အကျဲ ကို အောက် ပါအတိုင်း ဒေါင့်များ ဖြတ်ပါရန်။
၂။ ဒေါင့်များကိုခေါက်ကာ လေးဒေါင့် ခြင်းကလေး ဖြစ်လာရန် ချိုးပါ။
၃။ အောက်ပါ ပုံ အတိုင်း လေးဒေါင့် အဖုံး တစ်ခု ချိုးပါ။
၄။ ပုံ ပါအတိုင်း လေးဒေါင့် အဖုံး ကို အောက်ခံ အိမ် တွင် တပ် ပါ။ ဆက်သည့် နေရာ များကိုကြေးနန်း ဖြင့် ချီပါ။
၅။ အောက်တွင် ပြထားသည့် Stell Wool သည် 0000 အဆင့် ရှိ အနူးညံ့ ဆုံး အမျိုး အစား ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို Housing ထဲ ထည့် ကာ ဝှေ့ ရမ်း မည့် ကြိုး ဖြင့် ချီပါ။
၆။ ဝှေ့ ရမ်း ရာ တွင် အလေးချိန် စီး နေစေရန် Housing အနီးတွင် အလေး ( Weight )တစ်ခု ထည့် ပေးပါ။
ထိုအချိန် တွင် အသုံးပြုရန် အသင့် ဖြစ်နေသည့် Stell Wool Housing တစ်ခု ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အန္တရာယ် ကင်းရေး အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း။
၁။ Steel Wool ကို မီးတို့ လိုက်ပြီး မီးလောင် အားကောင်း လာလျှင် မီးဖွား များ ပေါက်ထွက် လာပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Steel Wool ဓါတ်ပုံရိုက် မည့် နေရာ သည် မီးလောင်စာ မရှိသည့် လူသူ ကင်းဝေးသည့် နေရာ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ မိုးရွာ ပြီးစ စိုစွတ် သော နေရာ ဆိုက ပို ကောင်းပါသည်။
၂။ မီးလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းသတ်ရန် မီးသတ်ဆေးဘူးငယ်၊ ရေ စို အ၀တ် စသည်တို့ ကို ဆောင် ထားသင့်ပါသည်။
၃။ မီးလောင် နေသည့် Steel Wool ကို ဝှေ့ ရမ်း မည့် သူ အနေနှင့် မီးဖွားများ ကျ လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေစို မိုးကာ ၊ ရေ စို ဦး ထုတ် တို့ စသည် တို့ ကို ၀တ် ထားသင့် ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း။
အောက်ပါပုံ မှာ Johnny Cash ၏ တစ်ချိန် က ထင်ရှား ကျော်ကြားခဲ့သော “Love isaburning thing.” ကို တင်စား ရိုက်ကူး ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက် ပါ ပုံ ကို ရိုက်ရန် ပြင် ဆင် သည့် အဆင့် များ ကို အဆင့် လိုက် ဖေါ်ပြပါမည်။
၁။ Steel Wool -00 မှ 0000 အဆင့် ရှိသော Steel Wool တစ်ထုတ် ကို ယူပါသည်။ အမျှင်သေးသည့် အတွက် မီးလောင် ရာ တွင် ပို၍ လွယ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ Steel Wool အလိပ်ကို ဖြန့် ကာ လေး လက်မ၊ ရှစ်လက်မ အရွယ်များဖြတ် ကာ အောက်ပုံ တွင် ပြထားသကဲ့ သို့ မွှေတန် ( Whisk ) အတွင်းသို့ တည့်ပါသည်။ မွှေတန် မဟုတ်ပါကလည်း Steel wool ထည့်ကာ ကြိုးချိတ်၍ ဝှေ့ ရမ်း နိုင်သည့် အရာ မည်သည့် အရာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အ ပေါက် ကျယ်ကျယ် ဖြစ် ရပါမည်။ ကျဉ်းနေလျှင် မီးဖွား အထွက် နည်း မည် ကို သတိပြု ရပါမည်။
၃။ လှည့် မည့် သံကြိုး ကို ခြောက်ပေ ခန့် ဖြတ်ပြီး အောက်တွင် ပြထားသည့် အတိုင်း မွှေတန် တွင် ချည် ပါသည်။ မီးလောင်သည့် နေရာ တွင် သံကြိုး နှင့် ချည်ပြီး အလှမ်း ဝေး သည့်နေရာ တွင် နိုင်လွန် ကြိုး နှင့် ဆက်ကာ ချည် လိုက လည်း ချည် နိုင်ပါသည်။
၄။ လူသူ ဝေးသည့် မြစ်ကမ်း ပင်လယ် ကမ်းခြေ စသည့် နေရာ မျိုးကို ရွေးချယ်ပါသည်။ စွတ်စိုနေသောနေရာ ဖြစ်ပါက ပို၍ကောင်းပါသည်။ ပြင်ပမှ အလင်း ရောင် မ၀င်နိုင်သည့် နေရာ ဖြစ်လျှင် ပို ကောင်းပါသည်။ ဆောင်း မည့် ထီး ကို ရေ ဆွတ်ရပါမည်။
ဤ ပုံတွင် Steel Wool ကို မိုး ရွာ သကဲ့ သို့ ဖြစ်နေစေရန် ကျောက် ဆောင် နောက်မှ နေ၍ ဝှေ့ ရမ်း ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက် ဆောင် ပေါ် သို့ ကျသည့် မီး ဖွားများက ခုန် ထွက် နေသည် မှာ ပုံ အတွက် အားသာ ချက် တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ Steel Wool မီးလောင်ချိန်မှာ စက္ကန့်နှစ်ဆယ်ခန့် ရှိပါသည် ။ အဆိုပါအချိန် အတွင်း ရိုက်ရပါမည်။ ပထမ ဦးစွာ အဓိက ရိုက်မည့် နေရာ တွင် LED Light ငယ် ကို ချကာ Manual Focus ချိန်ထားပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ ကို Camera Setting- Shutter Speed 20s, f-8, ISO 1600 နှင့် ရိုက်ရာ Over Expose ဖြစ်သွားပါသည်။
အောက်ပုံ ကိုမူ Shutter Speed ကို 20 Sec မှ 13 Sec သို့ လျှော့ ၍ ရိုက်ရာ တွင် Exposure အမှန်ရ လာပါသည်။ ရှေ့ တွင် “Love isaburning thing.” ဟုဆိုသည့် စာ ဆို နှင့် အညီ စုံ တွဲ တစ် တွဲ ကို ရေ စို ထီး မိုးကာ ထည့် ထားပေးပါသည်။
Frame တစ်ခု လုံး၏ လိုသည့် အရောင် ရစေရန် Filter, သို့ မဟုတ် White Balance ကို ချိန်ကာ သုံး နိုင်ပါသည်။ Steel Wool ကို ဝှေ့ ရမ်း ရာ တွင် အရောင် အမျိုးမျိုး ရှိသည့် အခြားသော Light Sources များကို လည်း ထည့် သုံးနိုင်ပါသည်။ Steel Wool မှ ထွက်သည့် အရောင်သည် လိမ္မော်ရောင် ဖြစ်ပါသည်။ Magnesium မီးရှို့ ပါက ထွက်သော အရောင်သည် အဖြူ ရောင် ဖြစ်ပါသည်။ Light Source များကို စိတ်ကူး ရှိသရွှေ့ ရွေးချယ် နိုင်ပါသည်။ ဗျောက် အိုး ( Fire Cracker ) အရောင်မျိုးစုံ ကိုလည်း စိတ်ကူး ကွန့်မြူး နိုင်သမျှ သုံးနိုင်ပါသည်။ အနု ပညာ ဖန် တည်း မှု ဖြစ်ပါသည်။ အကန့် အသတ်မရှိပါ။
Camera Setting များ။
အထက်ပါ ပုံ ၏ Camera Setting မျာ မူ Shuttre speed-30 Sec, f-8, ISO-200, White Balance- Tungsten/Incandescent ဖြစ်ပါသည်။ Stee Wool ကို မီး မရှို့မှီ အဆိုပါနေရာ တွင် LED Light ကလေး တစ်ခု ကို ချထားကာ Manual Focus ဖြင့် ကြို တင် Focus လုပ်ထားပါသည်။
စက်ဝိုင်း လှည့်သည့် Steel Wool ပုံ အများစု ၏ Camera Setting များမှာ Shutter Speed 15 to 20 Sec, f-8, ISO 100 or 200 ဖြစ်ကြပါသည်။ အလွန်မှောင်သည့် နေရာ ဖြစ်ပါက Shutter Speed ကို ပို၍ အချိန်ကြာကြာ ဖွင့် ထားနိုင် ပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ ကို 2D Circle လှည့် ထားခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ Camera Setting များမှာ Shutter Speed 30 Sec, f-3.5, ISO 200, White Balance- Auto ဖြစ်ပါသည်။ Tripod ဖြင့် Manual Focus ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Steel Wool လှည့် ပုံ မှာ ပထမ Steel Wool ကို စက်ဝိုင်းပုံ လက်ဖြင့် ဝှေ့ ရမ်းကာ ယင်းကဲ့ သို့ လှည့် နေစဉ် မှာ ပင် လူကို ပတ်ခြာ လှည့် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို အခါ မီးသည် ဘော်လုံး ပုံ ပေါ် လာပါသည်။ ထို့နောက် 2D ပုံ ရစေရန် ခြေ ထောက်ကို အငြိမ်ထားကာ အပေါ်ပိုင်း ကိုသာလှည့် သည်ဟု ရိုက်ကူးသူ က ရှင်းပြထားပါ သည်။
Steel Wool Photography နမူနာပုံများ။
အထက်ပါ ပုံ များမှာ ဖန်တည်း မှု စိတ်ကူး ပွားများနိုင်ရန် နမူနာများ သာ ဖြစ်ပါ သည်။ အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြ ခဲ့ ပြီးဖြစ်သကဲ့ သို့ အနုပညာ ဖန်တည်း မှု သာ ဖြစ်သောကြောင့် စိတ် အလျှင် လွင့် ကာ အကန့် အသတ်မရှိ ဖန် တည်း နိုင်ပါကြောင်း ဖေါ်ပြ အပ်ပါသည်။
Posted by Soe Hlaing at 05:16